माइक्रोबसको ठक्करबाट वृद्धाको मृत्यु
चितवन । चितवनको जगतपुरमा सहचालकले चलाएको माइक्रोबसको ठक्करबाट वृद्धाको मृत्यु भएको छ । जगतपुरबाट काठमाडौँजान लागेको ग १ ख ५८१४ नम्बरको माइक्रोबसको ठक्करबाट भरतपुर महानगरपालिका– २३ की ७५ वर्षीय चिनीमाया भुजेलको मृत्यु भएको चितवनका प्रहरी उपरीक्षक दीपक थापाले जानकारी दिए । काठमाडौँ जान लागेका नात...
जिप दुर्घटनामा १ मृत्यु, १ गम्भीर घाइते
श्रावण १३, 2074 कलैया, । जितपुर कलैयामा जिप दुर्घटनामा १ मृत्यु भएको छ भने १ जना गम्भिर घाइते भएका छन् । पूर्वपश्चिम महेन्द्रराजमार्गअन्तर्गत बारा सिमरा–जितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं १६ मा शुक्रबार बिहान जिप दुर्घटना हुँदा १ मृत्यु भएको छ ...
नारायणी नदीमा पानीको बहाव बढेपछि स्था...
श्रावण १३, 2074 नवलपरासी, । केही दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण नारायणी नदीमा पानीको बहाव बढ्न थालेपछि नारायणी नदी सहित गण्डक क्षेत्र आसपासका स्थानीयवासीमा त्रास फैलिएको छ । नदीमा पानीको बहाव बढ्दै गएपछि त्रास फैलिएको हो । यस क्षेत्रका स्थ...
राष्ट्रपति भण्डारीद्धारा रक्षाबन्धन ग...
श्रावण १३, 2074 काठमाडौँ,। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रक्षाबन्धन पर्वको उपलक्ष्यमा ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रका राजयोगी तथा राजयोगिनीसित रक्षाबन्धन ग्रहण गरेकी छन् । शीतल निवासमा शुक्रबार बिहान राष्ट्रपति भण्डारीले रक्षाबन्धन ...
‘आँखा कि मसाल ?’ दोधारमा नयाँ शक्ति
श्रावण १३, 2074 काठमाडौं । भनिन्छ, नयाँ जोगीले धेरै खरानी घस्छ । त्यही भएको छ नयाँ शक्ति पार्टीलाई पनि । त्यसमा पनि नयाँ शक्ति पार्टी ‘न नयाँ, न पूरानो’, खास के हो त ? भनी प्रश्न गर्नेहरुको संख्या बढ्न थालेको छ । नयाँ पार्टी घोषणाका बेला...
प्रलोभनमा बेचिन्छन सुर्खेतका चेलीबेटी
श्रावण १३, 2074 सुर्खेत, । मानव जीवनकै कलङ्कका रुपमा रहेको चेलीबेटी बेचबिखन सुर्खेतमा पनि अझै समस्याकै रुपमा रहेको छ । मानव जीवनको विकासको सेरोफेरोबाट शुरु भएको मानवीय हिंसाका प्रकृतिहरु फेरिए पनि चेलीबेटी बेचबिखनका घटना रोकिएका छैनन् । ...
सहायक प्रहरी निरीक्षक गुरुङ मृत फेला
श्रावण १३, 2074 धादिङ, । उत्तरी धादिङको इलाका प्रहरी कार्यालय, दार्खामा कार्यरत सहायक प्रहरी निरीक्षक वीरबहादुर गुरुङको शव शुक्रबारबिहान ६ बजे इलाका प्रहरी कार्यालयनजिकै मकैबारीमा फेला परेको छ । बिहीबार राति ११ बजे सुतेका गुरुङको लास शुक्रबार बिहान मकैबारीमा फेल...
छतमा पनि तरकारी खेती
श्रावण १३, 2074 पाल्पा । जमिन छैन, तर उनले ७० किलो तरकारी उत्पादन गरी बेचे । श्रम, ज्ञान र सीपको प्रयोग गरेर पाल्पा जिल्ला बगनासकाली गाउँपालिका–२, पोखराथोकका एक किसानले घरको छतमा राखिएका ड्रममा गरिएको तरकारी उत्पादन जमिन बिना पनि उत्पादन ...
नवनियुक्त उर्जामन्त्री शाही भन्छन्, म...
श्रावण १२, 2074 काठमाडौं । नवनियुक्त उर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले झोलामा खोला बोकेर हिँड्ने दलालीलाई जसरी पनि कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । मन्त्री शाहीले झोलाम खोला बोकेर हिड्ने तर काम नगर्ने दलालीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्या...
श्रावण १२, 2074 काठमाडौँ, । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १५ हजार घुस लिएको आरोपमा डिभिजन सहकारी कार्यालय सिरहाका प्रमुख रामप्रसाद सुवेदी र कार्यालय सहयोगी अवतार बस्नेतलाई पक्राउ गरेको छ । योग्य महिला कृषि सहकारी संस्था दर्ता गर्न प...
गरिवी निवारण कोषसंग साँझेदार ९ संस्था...
श्रावण १२, 2074 रामेछाप । रामेछाप जिल्लामा गरिवी निवारण कोषसंग साझेदार रहेर काम गरिरहेका ९ संस्थाहरुको संस्थाहरुको बैठक सम्पन्न भएको छ । सृजनशिल युवा समाज चिसापनीले आयोजना गरेको सो बैठकमा सदरमुकाम मन्थलीमा बुधबार बसेको बैठकमा ९ साझेदार स...
बस दुर्घटनामा ३० घाइते १ खोलाले बगाएर...
श्रावण १२, 2074 लमजुङ । कास्कीको मादीमा बस दुर्घटना हुँदा ३० यात्रु घाइते भएका छन् भने १ खोलाले बगाएर बेपत्ता भएका छन भने २ व्यक्ति बस भित्र च्यापिएर रहेको स्थानीयवासी प्रवेश घिमिरेले जानकारी दिए । कास्कीको पोखराबाट लमजुङको कोलासोथार गाउ...
के होला भरतपुर प्रकरणको परिणाम ?
श्रावण १२, 2074 काठमाडौं । पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनको मत परिणाम आइसक्दा पनि भरतपुर महानगरपालिकाको मत परिणाम अझैं अनिश्चित बन्दै गएको छ । वडा नं. १९ मत गणना भइरहेका बेला माओवादी कार्यकर्ताले नै मत पत्र च्यातेका थिए । तर, त्यसविरुद्ध ...
१ सय ५० वर्षपछि भद्रकाली मन्दिर पुनःन...
श्रावण १२, 2074 पोखरा, । पोखराको प्रसिद्ध भद्रकाली मन्दिर १ सय ५० वर्षपछि पुनःनिर्माण हुने भएको छ । विसं २०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पका कारण क्षतिग्रस्त मन्दिर श्री गणेश तथा भद्रकाली मन्दिर सेवा समितिको सक्र...
खानेपानीको अभाव झेल्दै १ सय घर परिवार
श्रावण १२, 2074 डडेल्धुरा,। मध्ये वर्षात भइसक्दा पनि डडेल्धुरा भित्री मधेशका १सय घर परिवारले लामो समय देखि खानेपानीको अभाव झेलिरहेका छन् । डडेल्धुरा परशुराम नगरपालिका–६, रामपुरका स्थानीय बासिन्दा करिब आधा घण्टाको दूरीमा रहेको रंगुन नद...
← अघिल्लो 12… 810 811 812 813 814 815 816 817 818 … 862 863 पछिल्लो →